Indlu yesipili yimarike yeJean Talon
EMontreal, Quebec, Canada
Igumbi elikhulu lokulala eli-3 elifudumeleyo elinendawo yokutyela kumgangatho wesibini yi-Italiya encinci, iimitha ezingama-70 ukusuka kwiJean Talon Metro metro kunye nemizuzu emi-3 yokuhamba ukusuka kwimakethi edumileyo yaseJean Talon. Ifakwe ngokupheleleyo, ixhotyiswe ngokupheleleyo.
Indawo enye yokupaka ifakwe ngasemva.
Imizuzu eli-12 kumgca we-metro ofanayo ukusuka kwi-Université de Montreal
Imizuzu eli-12 kude ngemetro ukusuka kwiYunivesithi yaseQuebec ukuya eMontreal
Imizuzu engama-20 kude ngemetro evela kwiDyunivesithi yaseMcGill
Imizuzu engama-25 uhamba ngemetro evela kwiYunivesithi yaseConcordia
Eli ligumbi elikhulu elikwisakhiwo esinemigangatho emibini. Esi sakhiwo sineminyaka engaphezu kwekhulu ubudala kodwa ndalungisa uninzi lwaso kwiminyaka emithathu eyadlulayo. Onke amagumbi aneefestile ezintsha. Inebalcony ngaphambili kodwa iterrace yangasemva ivula ngasemva kunye nakuwona mthi mkhulu ebumelwaneni. Ipholile, ishushu, kwaye ibekwe kakuhle kakhulu ngokubhekiselele kuthutho lukawonke-wonke kunye nemisebenzi yentlalo okanye yenkcubeko.
4.63 · Izimvo eziyi-84
I-appartment ibekwe kwindawo enenkcubeko ezininzi, kunye noMzantsi nombindi weMelika, iAsia, iAfrika, iivenkile ezithengisa ukutya zaseYurophu kunye neendawo zokutyela. Isikhululo semetro esiziimitha ezingama-70 ukusuka kwindawo sivula indlela ezimbini (imigca eluhlaza kunye neorenji), enye ukuya edolophini/ izibuko elidala kunye nesinye kwingingqi yeCDN (apho iSaint-Joseph oratory ikhona) kunye nendawo yaseOutremont evula isiphelo seMile.
Kukwakuhambo lwemizuzu emi-3 ukusuka kwi-Little Italy, imizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka kwiipaki ezininzi (phakathi kwazo iPark Jarry apho luqhutyelwa khona ukhuphiswano lwentenetya lwamazwe ngamazwe), imakethi edumileyo yeJean Talon endingenakuphoswa kukundwendwela yonke imihla kukuhamba imizuzu emithathu kuphela (ukuba Ukhawuleza kancinci kwaye ufumane umgca oluhlaza eSaint-Denis;))
Kukho isikhululo seeteksi ekupheleni kwesitrato, i-bixi (ibhayisekile yoluntu yaseMontreal erentayo) kufutshane nesikhululo seeteksi kwaye unokuqesha imoto ngomzuzu phantse emnyango.
Uninzi lweendawo zokutyela kunye neendawo ze-brunch zilapha kwaye ndinoluhlu endinokucebisa lona ukuba ungumntu othanda ukutya :)
I am a nomad at heart and I love hosting people. I know my city almost by heart and will be available to suggest activities, restaurants, cafes, festival and cultural venues that might interest you. Welcome to Montreal Samir
Ndidla ngokucebisa iindwendwe malunga nayiphi na imisebenzi abafuna ukuya kuyo. Ukuba bafuna uncedo, ndifumaneka ngokulula ngefowuni okanye ngeSMS. Ndiyakuthanda ukuhlalisana kwaye leyo yindlela endandisoloko ndilihamba ngayo ihlabathi. Ukuba naluphi na uncedo endinokukunika ngalo ungaze uthandabuze :)
Ndidla ngokucebisa iindwendwe malunga nayiphi na imisebenzi abafuna ukuya kuyo. Ukuba bafuna uncedo, ndifumaneka ngokulula ngefowuni okanye ngeSMS. Ndiyakuthanda ukuhlalisana kwaye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montreal